Demi Lovato နှင့်နစ်ခ်ယောန
Demi Lovato နှင့်နစ်ခ်ယောနရှည်လျားသီချင်းများနှင့်ရိုက်ကူးရေးကလစ်ပ်မှတ်တမ်းတင်အတွက်ပူးပေါင်းအတူတကွအလုပ်လုပ်ပါပြီ။ ထို့အပြင်အနုပညာရှင်တွေအတူတူမန်နေဂျာ, သူတို့သည်မကြာသေးမီကပူးတွဲစံချိန်တင်တံဆိပ်၏အဖွင့်ကြေညာခဲ့သည်။ ဒါဟာအခြိနျမှနျမှသူတို့ရဲ့အချစ်ဇာတ်လမ်းအကြောင်းကိုကောလာဟလများရှိပါတယ်အံ့သြစရာတော့မဟုတ်ပါဘူး။
နစ်ခ် Jonas နှင့် Demi Lovato ချိန်းတွေ့?
နစ်ခ်ယောနဂျိုးယောန၏ညီအဖြစ် 2013 ခုနှစ်တွင်တည်ရှိရန်စဲထားတဲ့မိသားစုအဖွဲ့ကိုယောနညီအစ်ကိုတို့, ၏ဟောင်းတစ်ဦးအဖွဲ့ဝင်တစ်ဦးဖြစ်ပါတယ်။ ညီအစ်ကိုအပေါင်းတို့ကိုတစ်ကိုယ်တော်အသက်မွေးဝမ်းကျောင်းစတင်တည်ဆောက်ခဲ့ပါတယ်။ Demi Lovato ဆက်ဆံရေးရုပ်ရှင်၏ရိုက်ကူးရေးကာလအတွင်းစတင်ခဲ့ပြီး 2010 ခုနှစ်တွင်ဂျိုးယောနဇာတ်ခင်းနေတယ် "စခန်းရော့ခ်။ " သို့သျောလညျး, တူညီတဲ့နှစျ, pair တစုံက၎င်း၏ခွဲခြာကြေညာခဲ့သည်။
Demi Lovato သူမကဆိုပါတယ်ဆဲသွားသူ Wilmer Valderrama, နဲ့ဆက်ဆံရေးစတင်ခဲ့ပြီးနောက်။ 2015 ခုနှစ်တွင်လူငယ်များ၏ထိတွေ့ဆက်ဆံမှုအကြောင်းကိုပင်ကောလာဟလရှိကြ၏, ဒါပေမဲ့သူတို့ကတရားဝင်နှစ်ဖက်စလုံးအားဖြင့်ငြင်းပယ်ခဲ့ကြသည်။ အတော်လေးမကြာသေးမီကသတင်းအချက်အလက်သူမဘယ်မှာ Demi Lovato နှင့်နစ်ခ် Jonas နမ်းပုံကနေအဖြစ်ထင်ရှားသူ Nick Jonas, နှင့်တွေ့ဆုံကြောင်းလည်းရှိ၏။ သို့သော်လူငယ်များ၏ထုတ်ပြန်ချက်များကဖော်ရွေနမ်းထက်ပိုဘာမျှဖြစ်ခဲ့သည်။
အနာဂတ် Now ကိုလှည့်လည်မှာနစ်ခ် Jonas နှင့် Demi Lovato
ဤအတောအတွင်းနစ်ခ်နှင့် Demi တကယ်ပရော်ဖက်ရှင်နယ်နယ်ပယ်ထုတ်လုပ်မှုအတူတကွအလုပ်လုပ်ကြသည်။ ဒါကြောင့်သူတို့နှင့်အတူအလုပ်လုပ်အထွေထွေမန်နေဂျာ - ဖီးလ် McIntyre ။ ဒါဟာသူတို့ထဲကသုံးယောက် Safehouse Records ကိုခေါ်တော်မူကာလွတ်လပ်သောစံချိန်ကုမ္ပဏီဖန်တီးရန်ဆုံးဖြတ်ခဲ့သည်။ မကြာခင်မှာပဲ 2016 Demi Lovato နှင့်နစ်ခ်ယောန၏နွေကာလ၌မိမိနောက်ဆုံးပေါ်အယ်လ်ဘမ်၏ထောက်ခံမှုအတွက်ပူးတွဲခရီးစဉ်ကိုသွားပါလိမ့်မယ်အချက်အလက်တွေကိုလည်းရှိ၏။ သူကအနာဂတ် Now ကိုလှည့်လည်ခေါ်သောနှင့်နမူနာ setlist ရေးစပ်သီပထမဦးဆုံးဖျော်ဖြေပွဲသည်အထိလူသိများလိမ့်မည်ဖျော်ဖြေခဲ့ပါတယ်။ ထို့အပြင်ပြုလုပ်ထားပြီးအတွင်းခံအဝတ်အစားဗစ်တိုးရီးယားရဲ့လျှို့ဝှက်ချက်၏အမှတ်တံဆိပ်အားဖြင့်တည်ခင်းဧည် 2016 ခုနှစ်ခရစ္စမတ်ရှိုးအပေါ် Demi Lovato နှင့်နစ်ခ် Jonas လိမ့်မယ်ဧည့်ကြယ်ပွင့်, ကြေငြာခဲ့သည်။
ချာလီရောင် Denise Richards နိုင်ကျင့်
နေ့ဓာတ်ပုံ: Kim Kardashian က Malibu အတွက်ကမ်းခြေပေါ်မှာစိတ်လှုပ်ရှားပုံကိုချွတ်ပြသ
Miley Cyrus ရဲ့နဲ့ Liam Hemsworth ဟာပျားရည်ဆမ်းခရီးခံစားနေကြသနည်း
အဲလက်စ် Rodriguez ဂျနီဖာလိုပက်ဇ်နှင့်သားသမီးတို့အဘို့အသစ်တစ်ခုကိုလေယာဉ်ဝယ်
သူ Alicia Vikander နှင့်မိုက်ကယ် Fassbender
George Clooney နှင့် Amal ပဲရစ်အားလပ်ရက်အပြီးဗြိတိန်နိုင်ငံလန်ဒန်မြို့မှပြန်လာသော
မာရီ Fredriksson, Roxette ၏ဦးဆောင်အဆိုတော်စင်မြင့်အရွက်
ဘရွတ်ကလင်းဘက်ခမ်းနှင့်မော်လ်ဒိုက်အတွက်ဆိုနီယာဘင် Ammar သူ၏ပုဂ္ဂိုလ်ရေးအသက်တာ၌ Idyll!
ဂရင်းလန်း - ကမ္ဘာပေါ်မှာအကြီးဆုံးကျွန်းတစ်ကျွန်း
ဒယ်အိုးအတွက် Battery ကိုအတွက် Courgettes
အစာရှောင်ခြင်းနှင့်အရသာ Meatless pancakes - ကွဲပြားခြားနားသောစမ်းသပ်မှုများအတွက်ချက်ပြုတ်နည်းများရေပေါ်မှာကြက်ဥမပါဘဲ